Samy manana ny mahamaika azy | NewsMada
Samy manana ny mahamaika azy
Par Taratra sur 24/04/2018
Manoratra tantara vaovao indray ny firenena malagasy, manoloana ny zava-mitranga ankehitriny. Efa kihon-dalana tsy azo ihodivirana sa mbola azo iverenana ihany? Mety samy hilaza fa eto Antananarivo ihany ity hetsika ity fa tsy ny Malagasy rehetra akory, satria tsy mahenika ny faritra 22. Marina izany, fa ny mety hiitarany any amin’ny faritra hafa no ahina. Na eto an-dRenivohitra ihany aza, mety hanova zavatra tokoa a! Efa mandeha ny fanehoan-kevitra amin’ny tambajotra sosialy, eny anaty taxi-be, sns, fa hifarana ity fitondrana ity. Hifarana tokoa satria akaiky ny fifidianana. Eo amin’ity resaka ity ny olana ka mahatonga izao hetsika rehetra izao.
Maika ny mpanao hetsika ary tonga dia “action”, hoy ny fitenenana. Nafana ny asabotsy teo, ary maro ny nihevitra fa ho mafy no ho izay ny omaly, saingy nilamina tampoka.
“Izay no tadiavina”, hoy ny mpitazana, izay efa ny asabotsy teo no tokony navela tamin’izao ireo mpanao fihetsiketsehana fa samy manana ny mahamaika azy.
Ny famahana ny olana tokoa no tokony himasoana haingana, dieny mbola tsy miredareda ny afo. Tsy vahaolana ny fandranitana sy ny teny mahery anaty kabary politika sy fitokanana. Ekena fa samy manana ny mahamaika azy ny rehetra, saingy laharam-pahamehana ny famahana krizy mba hahatongavana any amin’ny fifidianana eken’ny rehetra.
Heverina fa hisy izany ny vahaolana atsy ho atsy momba ity raharaha ity fa tsy hanamafy loha any amin’izay mahamaika azy ny mpanao politika fa hijery ny mahasoa ny vahoaka.
Eo ihany koa ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Tsy ny eny Analakely ihany no andrasana mafy fa ny firenena iray manontolo mihitsy. Ny ady amin’ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo any ambanivohitra. Anisan’ny mahamaika ny vahoaka ihany izay lafiny izay.
Ekena aza fa samy manana ny mahamaika azy ny rehetra, saingy mby ao an-tsain’ny mpanao politika, ny mpitondra ao anatiny, ny mahamaika eto amin’ity firenena ity? Mila fitoniana ny vahoaka, mila fiovana ihany koa anefa andanin’izany. Raha tanteraka ireo, ho afaka anaty krizy sy kotontana ihany ity firenena ity.